प्रक्रिया र मैदान प्राप्त लागि रूसी नागरिकता
सालाना मान्छे को संख्या बधाई नागरिकता प्राप्त गर्न हाम्रो देश मा वृद्धि छ धेरै पटक । हा यो सबैलाई आफ्नै कारण छ । लिन सम्पत्ति को रूसी पासपोर्ट, एक इच्छा छ, पर्याप्त छैन । तपाईं आवश्यक एक राम्रो कारण लागि प्राप्त रूसी नागरिकता छ । बुझ्न गर्ने अधिकार छ, भर गर्न भेट्टाउने, एक रूसी पासपोर्ट, यो लागू गर्न आवश्यक छ गर्न संघीय व्यवस्था ‘मा नागरिकता को रूसी संघ’ को.
यो त्यहाँ पाउन सक्छन् भनेर जवाफ प्रश्न गर्न के गर्न रूपमा मैदान प्राप्त लागि रूसी नागरिकता आज अवस्थित.
चार अंक निर्धारित छन्
त्यसैले, यो पासपोर्ट को रूसी संघ गर्न सक्छन् प्राप्त: सामान्य मा, यी प्रावधान छन् धेरै धब्बा, त्यसैले यो लायक खनेर मा विवरण बुझ्न यो विषय । लेख को यो संघीय व्यवस्था कसरी विस्तार वर्णन प्राप्त नागरिकता को रूसी संघ मा सामान्य मैदान छ । यो भन्छन् कि हरेक वयस्क कानूनी व्यक्ति सही छ त । मात्र भने तर उहाँले: मा अन्तिम बिन्दु छन् रोचक. यो अवधि को निवास कम गर्न सकिन्छ भने एक वर्षको व्यक्ति नागरिकताको लागि आवेदन छ: र केही मानिसहरू, छैन आवश्यक कुनै आधार प्राप्त लागि रूसी नागरिकता देखि माथि । यो लागू भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष अघि रूस. नै लागू गर्न नागरिक राज्य भनेर प्रयोग हुन, जो सेवा को लागि कम से कम तीन वर्ष मा एक अनुबंध संग रूसी सशस्त्र सेना वा अन्य सैन्य. त्यसैले, माथि थिए छोटकरीमा वर्णन मैदान अधिग्रहण को रूसी नागरिकता छ । मा सरल क्रम, सबै कुरा देखिन्छ पनि अधिक प्राथमिक र बस. गर्न को सार बुझ्न को प्रक्रिया हो, तपाईं बस गर्न आवश्यक पढ्न लेख को नै संघीय व्यवस्था छ । यो बारे भन्छन् विभाग छ जो मानिसहरू लागू गर्न सही प्राप्त बिना निवास परमिट र जीवित छैन आवश्यक पाँच वर्ष छ । त्यसैले, यी हुन् जो विदेशीहरू: यी अवस्थामा साधारण र सबैभन्दा साधारण छ । सबै तीन आधार हासिल लागि नागरिकता हो गहन छ । धेरै मानिसहरू जारी गरेका छन् पासपोर्ट मा यी सर्तहरू छ । हो, त्यो सबै छैन. त्यहाँ अन्य मैदान प्राप्त लागि रूसी नागरिकता मा एक सरल प्रक्रिया छ । आप्रवासी लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ एक रूसी पासपोर्ट तिनीहरूले भने: तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, गर्न तरिकामा पाउन एक रूसी पासपोर्ट छैन त सानो छ । जो एक व्यक्ति फिट गर्दैन एक्लै सधैं सक्छन् फाइदा लिन अर्को. यदि तपाईं लगानी केही लाख मा व्यापार को विकास को, छैन सबैलाई गर्न सक्छन्, त्यसपछि प्राप्त एक खोजे-पछि विशेषता र काम गर्न को लागि यो धेरै वर्ष को लागि एकदम वास्तविक छ । सबैभन्दा कठिन चरण समावेश डिजाइन अस्थायी निवास परमिट. यो पहिलो चरण पछि एक भिसा प्राप्त हुनेछ जो माध्यम पारित गर्न एक विदेशी छैन जो एक लागि आधार प्राप्त रूसी नागरिकता छ । यसको लागि दर्ता तथापि, लगभग एउटै कागजातहरू आवश्यक. यहाँ आफ्नो सूची: यो सामान्यतया लिन्छ दुई महिना लागि प्रतीक्षा गर्न एक निर्णय । त्यसपछि, केही समयअघि समाप्ति को पहिलो वर्ष को जारी पछि, विदेशीले गर्न आवश्यक हुनेछ प्रदान संग एक प्रमाणपत्र पुष्टि आफ्नो आय । त्यसैले, यो माथि भनिएको थियो कि मैदान र प्रक्रिया प्राप्त गर्न को लागि नागरिकता को रूसी संघ निर्धारित संघीय व्यवस्था छ । सिद्धान्त मा, त्यहाँ छन्, अधिक मौका गर्न विषय भएको रूस भन्दा यो देखिन्छ. तर सबै मान्छे मेल खान्छ माथि को कुनै पनि विभाग । धेरै मुद्दा गर्न एक निवास परमिट. र यहाँ को सर्कल आवेदकहरुको हकदार प्राप्त गर्न यो कागजात: खैर, सबै विषयमा प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू थिए सूचीबद्ध । र यदि छ जो एक व्यक्ति लागि एक आधार प्राप्त रूसी नागरिकता, तिनीहरूलाई सबै गरे खाता मा, उहाँले गर्न सक्छन् सङ्कलन सुरु कागजातहरू र जान दाखिल लागि एक आवेदन छ । यहाँ के छ तपाईं प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ: यो ध्यान दिनुहोस कि महत्त्वपूर्ण छ मा विदेशी पासपोर्ट त्यहाँ हुनुपर्छ एक टिकट पुष्टि विदेशी अधिकारलाई अस्थायी बाँच्न को क्षेत्र मा रूसी संघ. एक पनि आवश्यक छ ।, लागि कारण सरल प्राप्त नागरिकता को रूसी संघ मार्फत प्रदान एक आप्रवासी एक कम व्यापक प्याकेज को कागजातहरू छ । र, त्यहाँ छ । सूची हुन्छन् मात्र सात उप. यहाँ के तपाईं प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ: यो मुख्य सूची को जमानत । पक्कै मा निर्भर गर्दछ, खास मामला. नाम कुनै पनि तीन आधार प्राप्त लागि रूसी नागरिकता — प्राप्त र धेरै अधिक सूची को यही संख्या संग आइटम. त्यहाँ हुन सक्छ एक प्रमाणपत्र आवेदकको नागरिकता को सोभियत संघ, मा एक दस्तावेज अक्षमता, एक उपाधि, एक कागज मा रोजगार, आदि. कुनै पनि मामला मा, यो सूची निर्दिष्ट गर्नुपर्नेछ. यो प्रक्रिया छ अनुमति दिन्छ कि एक व्यक्ति फर्कने पहिले हराएको स्थिति को एक नागरिक को रूसी संघ. सञ्चालन, यो तपाईं प्रस्तुत गर्न आवश्यक निम्न सूची को कागजातहरू: यदि सबै कागजात संकलन गर्दै, त्यसपछि हुनेछ बाहिर चाँडै । यो प्रक्रिया मा, कानून छ रूपमा वफादार. यदि विदेशीहरू निर्णय गर्ने प्राप्त रूसी नागरिकता छोराछोरीलाई छ, त्यसपछि तिनीहरूले पनि, सङ्कलन गर्न एक यस्तै प्याकेज को कागजातहरू छ । एक बच्चा को चौध अठार वर्ष उमेर हुनेछ दिन लिखित सहमति छैन । यो पुष्टि हुनेछ आफ्नो तत्परता र व्यक्तिगत सजग प्राप्त गर्न चाहन्छन् रूसी नागरिकता छ । बच्चा भने छैन चौध वर्ष पुरानो, त्यसपछि यो सहमति भरिएको छ, दुई आमाबाबुले.
छोराछोरीलाई पेश गर्दा आवेदन गर्न
मात्र अपवाद छ छ कि ती छैन अझै प्रविष्ट सजग उमेर । धेरै अधिक सूक्ष्म हुन सक्छ भन्नुभयो बारे आधार र कार्यविधि प्राप्त लागि रूसी नागरिकता छ । यो असम्भव छैन उल्लेख गर्न समय छ । प्राप्त लागि प्रक्रिया रूसी नागरिकता जटिल र लामो छ । यदि एउटा विदेशीले पेश कागजातहरू मा सामान्य मैदान, त्यसपछि उहाँले हुनेछ सम्म प्रतीक्षा गर्न एक वर्ष । त्यसैले, यो कडा सिफारिश छ कि तपाईं ध्यान सङ्कलन कागजातहरू लागि दाखिल । — तपाईं फेरि सबै भन्दा शुरू । एक व्यक्ति भने लागि लागू हुन्छ सरल अवस्था, पर्खने अवधि हुनेछ, बारे आधा एक वर्ष । यो कम गर्न सकिन्छ तीन महिना. तर केवल भने आप्रवासी छ, एक देशी वक्ताले को रूसी भाषा, एक नागरिक, बेलारुस को किर्गिस्तान र काजकिस्तान वा मा एक सहभागीले. कुनै पनि मामला मा, व्यक्ति हुनेछ जानकारी को भित्र निर्णय तीस दिन को मिति देखि यसको जारी छ । अब हरेक लागि आधार प्राप्त रूसी नागरिकता अध्ययन गरिएको छ, तपाईं उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ लेख न. यो वर्णन जो मा अवस्थामा आप्रवासी सकिन्छ कानुनी अस्वीकार दर्ता को एक रूसी पासपोर्ट छ । त्यसैले, एक व्यक्ति आशा हुँदैन प्राप्त गर्न रूसी नागरिकता उहाँले भने: बढ्नु देखि सबै सूचीबद्ध, यो सम्भव छ गर्न राज्य संग भरोसा भनेर इन्कार लागि मैदान प्राप्त गर्न रूसी नागरिकता साँच्चै गहन र तार्किक
मा सम्बन्धविच्छेद को बेलायत अंग्रेजी माध्यम कोर्ट - प्रवासी व्यवस्था